Omhlabajikelele nawasekhaya China Micromotor Imboni Umbiko, 2016-2020 - China Shandong Better Motor
Global micromotor okukhipha wema ngasemnyango amayunithi 17.5 billion ngonyaka 2015, eneminyaka engu-on-nyaka ukwanda kwama 4.8%. Ngenxa imikhankaso nesimanje umkhakha futhi imishini, okukhiphayo kulindeleke ukuba ifike amayunithi 18.4 billion ngonyaka 2016 futhi asondele amayunithi 23 billion ngonyaka ka-2020.
China, nomkhiqizi micromotors esikhulu kunazo zonke emhlabeni, ekhiqizwa amayunithi 12.4 billion ngonyaka 2015, kuze 6.0% kusukela ngonyaka odlule, kanye ne-accounting for 70,9% wezindleko global. Wezwe micromotor okukhipha Kubikezelwa ukuba seduze amayunithi bhiliyoni 17 ngo-2020 ngesikhathi CAGR azungeze 7.0% ngesikhathi 2016-2020.
abakhiqizi Keymicromotor e China includeJohnson Electric, Welling Holding Limited, Zhongshan Okubanzi Ocean Motor Co., Ltd., futhi Wolong Electric Group Co., Ltd. Johnson Electric, njengoba ngobukhulu micromotor nomkhiqizi eChina, ephumelelisa ngenzuzo yaminyaka yonke overUSD1 bhiliyoni, ne isheya ezimakethe zomhlaba ka 4.3% ngo-2015.
EChina, micromotor uthola isicelo yayo ngokuyinhloko emikhakheni yendabuko, ezifana imikhiqizo umsindo, izinto zasendlini, bese imoto, elalineziboshwa Ingxenye ahlangene we 52,4% ku 2015. Njengoba bendabuko izimakethe isicelo kancane kancane ayegcwele, abashayeli eyinhloko micromotor ukukhula uzobe abasafufusa nemikhakha efana amandla imoto entsha, kudivayisi egqokenayo, irobhothi, UAV, futhi smart ekhaya.
Imininingwane Imboni: izimpahla China sika VCM for terminals mobile babe 542kk ngo-2015, kuze 12.9% unyaka nonyaka, bangazihluphi 45,9% wenani emhlabeni, kakhulu eliqhutshwa Smartphones kanye tablet PC. Nge ukugcwaliswa kancane kancane izimakethe bendabuko zabathengi electronics like smartphone kanye tablet PC, amadivaysi wearable iyoba indawo entsha ukukhula, eminye ekufukuleni ukufunwa micromotor. AmaShayina kudivayisi emakethe egqokenayo Kubikezelwa ukuthi inwebe at yonyaka ukukhula ngesilinganiso phezu 25%.
Imoto: Ngo-2015, funa China for micromotor yezimoto kwaba amayunithi 1.02 billion (24.9% wezindleko global, kulindeleke ukuba ifike amayunithi 1.62 bhiliyoni ngo-2020), ngaphansi kuka-3% ivela entsha amandla imoto. New amandla imoto yokuthengisa wakhula ngesilinganiso kwakwakhe yonyaka ka 152,1% ngesikhathi 2011-2015 eChina, ngokusekelwa izinqubomgomo asekhaya, ziyoba umfutho ukukhula okunamandla phezu eminyakeni embalwa eyalandela. Kulinganiselwa ukuthi ezimakethe micromotors abasha amandla imoto izogcina kwenyukela ngamaphesenti angaphezu kwangu-40% njalo ngonyaka ngesikhathi 2016-2020 isidingo esingeqile amayunithi ezingu-150 ngo-2020.
Robot: 248.000 asebenza ezimbonini kanti abayizigidi 6,41 inkonzo amarobhothi kwathengiswa jikelele ngo-2015, kuze 8.3% kanye 35.7% kusukela ngonyaka ngaphambili, ngokulandelana, ndawonye ukudala funa abangaba yizigidi 66,6 micromotors (ukulinganisa amayunithi ezingaphezu kwezigidi ezingu-300 ngo-2020) . Ngo-2015, China zaba 22.9% yemboni irobhothi yokuthengisa emhlabeni futhi mayelana 5.0% kuphela inkonzo irobhothi yokuthengisa, okubonisa isikhala elikhulu ekukhuleni.
Umthengi-grade UAV: ​​Ngo-2015, emhlabeni wonke umthengi-grade UAV yokuthengisa lidlule amayunithi 200,000, uma kuqhathaniswa nabangu-amayunithi kuphela esingaphansi 20,000 e-China. Njengoba ephansi engamamitha wezasemoyeni kancane kancane wavula, lo UAV emakethe Chinese uyoletha sikhathi sokukhula ngokushesha ngesilinganiso kuka 50%.
Ngaphezu kwalokho, izimakethe ezintsha zemikhiqizo 3D zokunyathelisa, smart ekhaya, imishini kwezokwelapha, ezishintshayo laboratory kusekelwa izinqubomgomo uyophinde ngilidlale singene igiya eliphezulu, eminye ukushayela ukufuneka micromotors.
Omhlabajikelele nawasekhaya China Micromotor Imboni Umbiko, 2016-2020 uqokomisa abalandeli:
micromotor umkhakha Global (umlando ukuthuthukiswa, usayizi emakethe, isakhiwo emakethe, ukuncintisana landscape, njll);
Micromotor umkhakha e China (status quo, usayizi emakethe, isakhiwo emakethe, ukuncintisana landscape, ukungenisa & nokuthengiswa, njll);
Izimboni Main umfula (izinto kazibuthe, ukuzala, njll), okubandakanya usayizi emakethe, isakhiwo emakethe, ukuthuthukiswa Amathrendi, njll .;
Izimboni Ezansi (ulwazi, imoto, yasendlini lisebenze, irobhothi, UAV, ukuphrinta 3D, smart ekhaya, imishini kwezokwelapha, njll), okubandakanya isicelo kanye emakethe;
11 omhlabajikelele nawasekhaya 10 Chinese abakhiqizi micromotor (operation, micromotor ibhizinisi, ukuthuthukiswa eChina, njll).
isikhathi Iposi: Feb-27-2018